Wasiir maamul goboleed oo ku hanjabay inuu xilka ka tagi doono, hadii aan la fulin codsigiisa! – Somali Top News
Axmad Madoobe oo afduubtay Ganacsato qaraabo dhaw la ah Farmaajo
Deg Deg: Maxkamadda ICJ oo sanadka dambe u dhigtay dacwadda Soomaaliya iyo Kenya
Farah Maalim asks Kenya to dump Madobe amid Jubaland fallout with central government
Somalia: Why Al-Shabaab Is Eyeing Ethiopia?
Somali Prime minister in U.S to attend IMF and World Bank forum as $18 million missing
Wasiir maamul goboleed oo ku hanjabay inuu xilka ka tagi doono, hadii aan la fulin codsigiisa!
May 29, 2019 May 29, 2019 Somali Top News	0 Comments
Wasiirka Wasaaradda Maalyadda Maamulka Hirshabeele Maxamed Cabdulle Maxamuud oo ku sugan magaalada Baladwayne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in magaalada Baladwayne ay kusoo celinayaan isticmaalka lacagaha shilin soomaaliga oo muddo halkaasi aanan laga isticmaalin.
Waxa uu intaa ku daray Wasiirka in xilka uu isaga taaayo hadii uu lacagaha shilin Soomaaliga isticmaalkooda aan lagu soo celin, waxaana uu tilmaamay dadka kunool maagalada Baladweyne iney dhibaato ku qabaan EVC-Plus-ka.
Waxa uu shegay in ay doonaayaan maamulka Hirshabeelle in ay sideedii hore ay kusoo laabaato nolosha dadka kunool magaaladaasi , maamulkoodana ay lacagaha canshuurta ah ku qaadayaan lacagta Shilin Soomaaliga .
Dadka kunool magaalooyinka Baladweyne iyo Buulobarde ee gobalka Hiiraan ayaanan mudo kudhaw laba sano isticmaalinn lacagta Shilin Soomaaliga ah,balse badalkeeda ayay mudadaasi isticmaalayeen lacagta doolarka iyo Evc-Pluska oo khasaaro iyo maciishad xumi u keentay bulshada.
← Somali Businessman gets order to raze old regiment school in Zambia
Axmad Madoobe oo kulan la qaatay Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya →
Gaadiidleyda ka shaqeysa inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Jowhar oo shaqada laga joojiyay
May 16, 2019 Somali Top News 0
Dowladda Federalka oo garoonka ku xanibtay xubno katirsan Jubbaland
September 29, 2019 Somali Top News 0
Dowladda Britain oo Soomaaliya ugu deeqday £8 million si abaaraha wax looga qabto